कांग्रेसको शरणमा देशको राजनीति ! | GNN Nepal GNN Nepal कांग्रेसको शरणमा देशको राजनीति ! | GNN Nepal
साउन ४ गते, २०७८ १५:१८ मा प्रकाशित
नेपालको वर्तमान राजनीतिले फरक मोड लिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको अक्षमताले देशको राजनीति यो अवस्थामा पुगेको हो । सत्ताको भोकमरीमा अलमलिएको नेतृत्व यतिबेला फरकफरक कित्तामा विभाजित छ । विशेषगरी पुष ५ यताका घटनाहरुले नेतृत्व जनताप्रति कति उत्तरदायी र जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । कम्युनिष्टहरुको बखेडाका कारण किनारा लागेको कांग्रेस सत्ताको कुर्सीमा यतिबेला रजगज गरिरहेको छ ।
२०७४ पछिको कांग्रेस
२०७४ सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था निकै कहालीलाग्दो थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका कारण अधिकांश ठाउँमा कांग्रेसले पराजय भोग्नुपर्यो । त्यतिबेला गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तामा अवतरण गर्यो । जसको नेतृत्व उनै केपी शर्मा ओलीले गरे । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमतको सरकार भयो । बहुमतको सरकार भएका कारण उसले थुप्रै महत्वपूर्ण कामहरु गर्न सक्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारका कुनैपनि काममा अवरोध गर्ने अवस्थामा थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको भरपुर फाइदा उठाउन सक्थे । तर यति समय सत्तामा बसेको बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री यतिबेला निरीह हुनुपरेको छ । यो समय ओलीले सरकारको बचाउ गर्ने काम मात्र गरे । सरकारको विरुद्धमा उञिनेहरुलाई उनले जहाँ भेट्यो त्यही पक्रिने नीति लिए ।
विभिन्न नियुक्तिहरुमा विवादित व्यक्तिहरुको सिफारिसदेखि लिएर सार्वजनिक ठाउँहरुमा विकृतिका चाङहरु थपिँदै गए । कोरोना महामारीका कारण जनता मृत्यु शैयामा पुग्दै गर्दा सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलहरु भए । यति हुँदापनि कांग्रेस केही बोलेन । उ सरकारविरुद्ध न सडकमा आउँथ्यो न त सदनमा नै । हाम्रो व्यवस्थाले भन्छ अचाक्ली गर्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । तर कांग्रेसले त्यो पनि गर्न सकेन । किनभने उसँग प्रस्ताव पारितका लागि आवश्यक संख्या नै थिएन । त्यसपछि पार्टीभित्रको खिचातानीका कारण प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरियो त्यो पनि दुईदुई पटक । जसको फलस्वरुप कांग्रेसको भाग्य चम्कियो ।
कांग्रेस : संविधान निर्माण, संविधान बचाउदेखि निर्वाचनसम्म
कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधान बन्नुका पछाडि अन्य दलहरुको भूमिका भएपनि त्यसको जश कांगे्रसले नै लियो । २०७४ सालयता कांग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षमा सीमित रहन पुग्यो । कम्युनिष्टहरुले सत्ता हातमा लिएपछि परिवर्तनको बिगुल घन्किन्छ भन्ने आशा धेरैलाई थियो तर त्यसो हुन सकेन । सत्ताको कुर्सी स्वयम् उनीहरुलाई नै बढ्ता भयो । र त्यसैको परिदृश्य हो वर्तमान राजनीति ।
पार्टीभित्रको विवाद र आपसी कुण्ठाका कारण सार्वजनिक दस्तावेज नै च्यात्ने काम भएको थियो । दुईदुईपटकको त्यो प्रयास अन्ततोगत्वा असफल भएको छ । संविधानलाई गुम्राहमा राख्नेहरुका लागि यो दरिलो झापड हो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित भएको छ । जसको नेतृत्वमा कांग्रेसको रजाइँ भयो ।
अब आगामी निर्वाचन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ । संसदको बाँकी अवधि सकिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ ।
कम्युनिष्टहरुको अक्षमताले कांग्रेसलाई फलिफाप
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला भने कम्युनिष्टहरुकै हर्कतका कारण सत्ता सम्हाल्न सफल भएको छ । २०७४ सालको निर्वाचन यता कांग्रेस किनारा लागेर बसिरहेको अवस्था थियो । किनारा लागेको कांग्रेसलाई ब्युँताउने प्रयास कम्युनिष्टहरुकै कमजोरीले भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जीएनएन नेपाललाई बताए । हिजो कांग्रेसले सँगै सहकार्य गरौं भन्दा पनि अस्वीकार गरिरहेको राजमो पार्टी आज उसैलाई समर्थन गर्न बाध्य भएकोमा उनले दुखेसो पोखे ।
‘यो सबै केपी ओलीजीको कारणले भएको हो । उनलाई हामीले सधैं सहयोग गरिरहेकै थियौं । कांग्रेस असल भएर होइन । कांग्रेसको विकल्पमा रहेकाहरुको नालायकीपनले उसले फाइदा उठायो । ‘
नेतृत्व लिनुपर्छ भनेपछी हामी तयार भएका हौँ
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद प्रकाश रसाईलीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेतृत्व लिनुपर्छ भनेपछि आफुहरु तयार भएको बताए । ‘केपी ओलीको अहंकारलाई परास्त गर्दै हामी अघि बढेका हौँ । अब देशमा कांग्रेसको सरकार छ । संसद्को बाँकी अवधि सकिएपछि देउवा नेतृत्वमा हामी चुनावमा सहभागी हुन्छौं र फेरि बहुमतसहित सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’ उनले भने ।
सरकार र विप्लव पक्षबीच तीनबुँदे सहमति, समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाइने